Global Voices teny Malagasy » Palestina: Ny hirifirin’ny sesitany · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 19 Jolay 2010 15:52 GMT 1	 · Mpanoratra Ayesha Saldanha Nandika avylavitra
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Palestina, Fifindràmonina, Mpitsoa-ponenana, Tanora
Ny mpitsoa-ponenana Palestiniana no iray isan'ny betsaka indrindra amin'ireo vahoaka nafindra-monina maneran-tany, miaraka amin'ny Masoivohon'ny Firenena Mikambana misahana ny Asa sy Fanampiana ny mpitsoa-ponenana ao Palestina any Proche Orient (UNRWA) izay mitondra fanampiana ho ana mpitsoa-ponenana voasoratra anarana efa ho 4.7 tapitrisa  any amin'ny faritra Palestiana bodoina , Jordan, Libanona ary Syria. Mbola an-tapitrisany koa ireo Palestiniana nafindra monina sy mpitsoa-ponenana  miaina eran'izao tontolo izao. Na izany aza, lalim-paka ny fifikiran'izy ireo amin'ny tanindrazana nilaozan'izy ireo, na ny raiamandreniny na ny raibe sy renibeny any aoriana any. Mpitoraka blaogy roa avy ao Gaza no nanoratra momba ny hirifirin'izany hoe an-tsesitany.
Tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity ny sambo Al-Amal (“Fanantenana”) tohanan'i Libia hitondra fanampiana dia saiky hiantsona tao an-tsisin'i Gaza  ( saingy voatery niova lalana  nankany Ejipta). Tao Gaza, i Kalam, mpitoraka blaogy, nieritreritra olona iray ary naniry mba ho isan'izay tany anatin'ilay sambo :
Ao Gaza ihany koa, i Kawther Abu Hani mihaino an-dreniny mahatsiahy :
“Mba tiako loatra ny hahafantatra izay niafaran'ilay tranokelintsika nilaozantsika ao Nazareta  efa herintaona lasa izao… Mba toy inona izao ny endrik'ireo havoana ankehitriny? Ary angamba na ny fofon'ny dità (thym) aza niova… Mba nahatratra firy taona ireo namako, ary izaho izao efa lasa anganongano ho an'ny taranak'izy ireo sisa… Andriamanitro ô, tsy mba nanotrona akory ny fampakarambadin-dry zareo aho. Satriko ery ny hiaina ny dingam-piainako rehetra miaraka amin’-dry zareo, ary izay nandrasako indrindra tamin'ny rehetra dia ny andro nianaranay ny amin'ny fitiavana sy nanadinoana ireo lalao, nony resim-pitiavana izahay nahatonga anay hatrany amin'ny fahadisoam-panantenana. Andraikaky ô, fa ny aretim-pitiavana tsy mbola mitovy amin'ny aretina ateraky ny fibodoana tanin'olona [ ataon'ny israeliana]. Tsaraoako ankehitriny…” Ary dia mitohy mahatsiaro hatrany izy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/07/19/7397/
 mpitsoa-ponenana voasoratra anarana efa ho 4.7 tapitrisa : http://www.unrwa.org/etemplate.php?id=86
 faritra Palestiana bodoina: http://www.ochaopt.org/generalmaps.aspx?id=96
 Palestiniana nafindra monina sy mpitsoa-ponenana: http://en.wikipedia.org/wiki/Palestinian_diaspora
 saiky hiantsona tao an-tsisin'i Gaza : http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2010/07/201071017258595579.html
 voatery niova lalana: http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2010/07/2010713124046138256.html
 anatin'ilay sambo: http://blog.amin.org/kalam/archives/300